Thwebula Crystal Security 3.7.0.40 Standard... – Vessoft
WindowsUkuphephaIsithwebuli se-antivirusCrystal Security
Ikhasi elisemthethweni: Crystal Security
I-Crystal Security – uhlelo olukhulu lwefu lokuthola nokususa i-malware kusuka kukhompyutha yakho ngesikhathi sangempela. Isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe befu ukuthola izinsongo ezisekelwe ku-VirusTotal yesevisi kanye nendlela yayo eqoqa idatha kusuka kuma-multiple systems emhlabeni wonke ukuvikela ukukhubazeka kwezinsuku ze-zero futhi ugweme ukuhlaselwa okubi. I-Crystal Security ikuvumela ukuthi uhlaziye ngokugcwele ukuhlaziywa noma ukuhlaziywa okusheshayo kwezakhi ezisengozini kakhulu zesistimu futhi ubuke isimo sokuhlaziywa kwezinto ezisolisayo, ezithembekile noma ezingathembeki. I-Crystal Security iqukethe amathuluzi amaningi okulungisa isinqumo ngokuzenzakalelayo senkinga ekhonjiwe ngaphandle kokungenelela komsebenzisi futhi usethe izimo lapho isofthiwe izothumela khona umlayezo wesaziso sobungozi. I-Crystal Security ine-interface enembile futhi iyisixazululo esihle kakhulu sokuhlinzeka ngezinga elengeziwe lokuvikelwa kwekhompyutha elingavumelani ne-antivirus egcwele.
Ukuthola i-Virus ngokusebenzisa ubuchwepheshe befu
Izindlela ezehlukene zesistimu yokuskena
Izinketho eziningi zokuhlela
Ukuvuselela okuzenzakalelayo noma kwesibhukwana
Thwebula Crystal Security
Amazwana ku Crystal Security
Crystal Security software ehlobene
I-AdwCleaner – ithuluzi lenzelwe ukuthola nokususa amamojula wokukhangisa. Isoftware isusa ngempumelelo imigwaqo yamathuluzi, amayunithi wesikhangiso nokungezwa okungafuneki.
IObit Malware Fighter – ithuluzi elinamandla lokuthola izinsongo ezifihliwe futhi ususe i-spyware enonya. Umbuso usebenzisa ubuchwepheshe befu ukuvikela ngesikhathi sangempela.
I-Malwarebyte – isoftware ukuthola nokukhipha amagciwane. Isoftware ikuvumela ukuthi uhlole uhlelo lwakho ngezinhlobo ezahlukahlukene zamagciwane, i-spyware kanye nezinye izinsongo.
I-Bitdefender Internet Security – i-antivirus enokuvikelwa kwamazinga amaningi ku-hlengware, ama-algorithms wesimanje wokuvikela ezinsongelweni ezikhona kanye nesicishamlilo ukulawula uxhumano lwenethiwekhi.
I-eScan Total Security Suite – isixazululo esibanzi se-antivirus esekela ubuchwepheshe befu kanye ne-heuristic ukuvikela ikhompyutha yakho, kanye namathuluzi angeziwe wokusebenziseka nokulungiswa kwesistimu.
I-Comodo Antivirus – i-antivirus isekela ubuchwepheshe bokuhlaziya bokuziphatha kanye nohlelo lokuvimbela ukungenela ukuthola ngempumelelo nokuvimba izinsongo ezahlukahlukene.
Ithuluzi ukubuka futhi basebenze ihluzo amafayela. Isofthiwe ikuvumela ukuba sisebenzise imiphumela ehlukahlukene futhi ukuguqula amafayela ifomethi athandwayo.